Dhulka Soomalida degto oo si weyn loogu Ciido | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dhulka Soomalida degto oo si weyn loogu Ciido
Dalka Somalia ayaa maanta si isku mid ah waxaa uga socda dabaaldegyo loo sameynayo maalinta 1aad ee Munaasabada ciidul Fitriga ka dib markii ay dhamaatay bishii barakeysneyd ee Ramadaan oo shalay ku ekeyd, taasoo dadka muslimiiinta ee caalamka ay soo guteen waajibaadka soonka oo ah mid ka mid ah shanta tiir ee Islaamka.
Dadweyne fara badan ayaa saaka u dareeray masaajidada iyo goobo kale oo loo cayimay halkaasoo ay ku soo tukadeen salaadii ciidul fitriga iyagoo intooda badan ku lebisnaa dhar aad u qurux badan oo ay ugu talo galeen munaasabada ciida iney ku soo dhoweeyaan.
Marka laga reebo degaanada Al-Shabaab oo shalay laga ciiday, Dowlada Soomaaliya, Somaliland, Puntland iyo maamulada kale ee dalka ayaa xalay waxay shaaciyeen xalay iney maanta tahay maalin ciid ah ka dib markii la dhameystiray 30ka ramadaan, iyadoo madaxda dowlada iyo maamulada kale ee dalka ay shacabka ugu hamblayeeyeen munaasabada ciida.
Xubno ka tirsan Baarlamanka iyo xukuumada ayaa saaka kala qeyb galay boqolaal dadweyne ah tukashada salaada ciida oo ka dhacday masjidka isbaheysiga Islaamka, iyadoo la xiray wadooyinka masaajidka gala.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee nabad sugida iyo kuwa ilaalada Villa Somalia ayaa lagu daadiyey min madaxtooyada illaa nawaaxiga masjidka Isbaheysiga Islaamka, si ay u xoojiyaan amaanka, waxaana dhowr meelood si adag loogu baarayaey dadka masaajidka galaya.
Markii la tukaday saaka salaada ciida oo ay ka horeysay takbiirta laga qaadayey masaajida ayaa waxaa wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah oo isugu jira rag, dumar iyo caruur wata lebisyo aad u qurxoon, iyagoo isku booqanaya guryaha oo lagu diyaariyey macmacaano loogu talo galay maalinta weyn ee ciidul Fitriga, waxaana dadkaasi ay isku marxabeynayeen ereyo ay ka mid yihiin ciid wanaagsan, ciid Mubaarak iyo kuwo kale oo fara badan.
Caruurta oo si gaar ah ugu dhex muuqatay dadka ayaa la arkayaa iyagoo wadooyinka ordaya oo ku lebisan dhar kala midab ah oo qurux badan, isla markaana ku ciyaaraya waxyaabo kala gedisan oo dhawaaqaya sida bastoolado, Firimbiyo iyo qalab kale oo loogu talo galay iney caruurtu ku ciyaarayaan, waxaana munaasabada maalinta ciidul fitriga awgeed, iyadoo idaacadaha maxaliga ah ay sii deynayaan suugaan iyo barmaamijyo gaar ah oo loogu talo galay maalmaha ciida.
Previous articleDigniin Farrintaan waxaa loo diray dhammaan shaqaalaha UN-ka ee ka howl gala Muqdisho, ee adiguna Fadlan Taxadar dheeri ah muuji.
Next articleSidee Daarasalaam ee magaalada Muqdisho looga ciiday maanta